किन बढ्दैछ झापाको कचनकवल गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमण? – Health Post Nepal
किन बढ्दैछ झापाको कचनकवल गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमण?
२०७७ जेठ ८ गते १९:१३
कचनकवल गाउँपालिका भारतको बिहारसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र हो। मुलुककै होचो भूमि कचनकवल ४८ किलोमिटर क्षेत्रफलमा अवस्थित छ।
यो गाउँपालिकाको पूर्व र दक्षिणमा बिहार सीमा पर्छ। उत्तरमा झापाको सदरमुकाम भद्रपुर नगरपालिका र पश्चिममा बाह्रदशी गाउँपालिका छ।
चार दिनको बीचमा ३५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि कचनकवल कोरोना ‘हटस्पट’ बन्ने खतरा बढेको छ। बुधबार यहाँ आएका प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले झापामा खतराको घण्टी बजेको संकेत गरे।
जिल्लास्तरीय कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा अनुगमन समितिको बैठकमा सहभागी बनेका मन्त्री घिमिरेले झापा ‘डेन्जर जोन’मा परेको बताएका थिए।
संक्रमितको बढ्दो तथ्याङ्कले पनि कचनकवल ‘हटस्पट’ बन्ने खतरा देखाएको छ। बिहीबार दिउँसोसम्म संक्रमण पुष्टि भएका सबै ३३ जना कचनकवलका बासिन्दा हुन्। भौगोलिक अवस्था र सामाजिक अवस्थितिका कारण पनि संक्रमण बढेको जानकारहरूको बुझाइ छ।
४० हजार बढी जनसंख्या रहेको कचनकवलमा पहाडी समुदायको बसोबास न्यून छ। यहाँ १५ प्रतिशत मुस्लिम र ३५ प्रतिशत राजवंशी समुदायको बसोबास छ।
साबिक केचना, पथरीया, बालुवाडी, घेराबारी, पाठामारी र बनियानी गाविस गाभिएर कचनकवल गाउँपालिका बनेको हो। यहाँको आठ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ।
यहाँको साक्षरता प्रतिशत ६८ छ। यहाँ सन्थाल, गनगाईं, गणेश, आदिवासी जनजातिको बसोबास छ । कचनकवल गन्धर्व समुदायको बसोबास रहेको प्रदेश १ मा भोजपुरको अरुणपछिको एकमात्र गाउँपालिका हो।
स्वास्थ्य सेवा हिसाबले यो गाउँपालिकामा एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसहित पाँचवटा स्वस्थ्य केन्द्र छन्। बनियानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एमबिबिएस डाक्टरको सेवा उपलब्ध छ। अन्य स्वास्थ्य केन्द्रमा अहेबको सेवा उपलब्ध रहेको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। एउटा वडामा मात्रै स्वास्थ्य चौकी छैन।
सुरक्षा दृष्टिले पनि यो गाउँपालिका खासै कमजोर छैन। यद्यपि, अहिले पनि त्यहाँ भारतबाट लुकिछिपी मानिस प्रवेश गरिरहेका छन्। केचना र घेराबारीमा सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प छ। सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीले हेर्छ।
केचनामा अस्थायी प्रहरी चौकी र बनियानीमा इलाका प्रहरी कार्यालय छ। कोरोना संक्रमण पछि १० वटा भन्दा बढी अस्थायी पोस्ट निर्माण गरी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
कचनकवलमा एक क्याम्पससहित २९ वटा विद्यालय रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गा पौडेलले बताए। यहाँ चारवटा मस्जिद र पाँचवटा बढी मदरसा छन्। त्यहाँका चारवटा विद्यालयमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ। क्वारेन्टाइनमा २ सय २२ जना राखिएको छ। ती सबै भारतको विभिन्न ठाउँबाट आएका व्यक्ति हुन् । ती मध्ये एकजना भारत सिक्किमको नागरिक भएको जनाइएको छ।
कचनकवल पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित टाेली।
पौडेलका अनुसार पथरिया माविको क्वारेन्टाइन सिल गरिएको छ। त्यहाँ राखिएका ३३ जनामध्ये १० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सिल गरिएको हो।
महेन्द्ररत्न मावि केचनामा ९५ जना अट्ने र जानुका मावि पाठामारीमा ३० बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाइएको छ। लक्ष्मीप्रसाद देवाकोटा मावि सुकनाडिगीमा ६५ वेडकाे क्वारेन्टाइन बनाइएको छ। बनियानीमा १५० वेडकाे क्वारेन्टाइन निर्माणको काम आजदेखि धमाधम हुँदै छ। त्यहाँ राखिएकामध्ये ३३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो।
उनीहरूलाई तीनवटा एम्बुलेन्समार्फत कोरोना अस्पताल विराटनगर पठाइएको छ। गाउँपालिका, रेडक्रस र दमकबाट एउटा एम्बुलेन्स मगाएर उनीहरूलाई विराटनगर पठाएको प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताए।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष अन्जार आलमले अहिलेको भयावह अवस्थालाई काबुबाहिर जान नदिन संघीय सरकार र प्रदेश १ सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
‘दिनमा १०/ १५ जनाका दरले संक्रमितको संख्या थपिँदै अएको छ, यो निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था हो,’ उनले भने, ‘उदयपुरको भुल्केमा जस्तो सहयोग भएन भने हाम्रो मात्रै प्रयासले संक्रमण नियन्त्रण गर्न असम्भव हुन्छ।’
भारतबाट बुधबार मात्र ८० जना कचनकवलवासी आएको उनले जानकारी दिए। सीमामा आएर अलपत्र परेकालाई आउन नदिए समस्याले अर्को रुप लिने उनको भनाइ छ। ‘आउने मानिस बाहिरका होइनन्, सबै यहीँका हुन्,’ उनले भने, ‘जबर्जस्ती रोकियो भने उनीहरू चोर बाटोबाट छिर्छन् र संकमण झन फैलने डर हुन्छ।’
परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न समेत नपाउँदा समस्या दिन दुई गुना रात चौगुना बढेको उनले बताए।
सीमाबाट ल्याएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेकाले संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिन भने नपाएको उनले बताएका छन्। पूरै गाउँपालिका सिल गरे पनि सीमामा आएर प्रहरी, जनप्रतिनिधिलाई खबर गर्ने मात्रै ल्याउने गरिएको छ। खबर नगरी कोही पनि नछिरेको उनको दाबी छ।
क्वारेन्टाइनमा स्वाव्थ्यकर्मीसहितको टोली परिचालित भएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद यादवले बताए। उनले संक्रमण रोक्न गाउँपालिकाले सबै शक्ति खर्चिएको जनाए।
संक्रमणदर बढ्दो झापामा कोभिड अस्पताल सञ्चालन र पिसिआर टेस्ट गर्ने प्रयोगशाला निर्माण हुने भएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम, अनुगमन तथा समन्वय समिति झापाको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
‘झापामा एउटा कोरोना अस्पताल र पिसिआर प्रयोगशाला बनाउने निर्णय भयो,’ समितिका संयोजक सोमनाथ पोर्तेलले भने।
ती दुवै कामका लागि समितिले स्थान खोजी गर्नेछ। पछिल्लो समयमा झापाका कोरोना संक्रमणको दर उच्च देखिएको र भारतबाट आउने नेपालीको संख्या बढ्दै गएपछि समितिले यस्तो तयारी गरेको हो।